မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စား အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် – BNN
မြန်မာနိုင်ငံ – အာဆီယံအထူးသံတမန်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ပံ့ပိုးကူညီရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စား အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) သည် ပဋိပက္ခအရှိန်အဟုန်လျှော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ပြီး ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ လက်ရှိအကျပ်အတည်းကာလအတွက် အကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနည်းကို ရှာဖွေလျက်ရှိသော အာဆီယံ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခိုင်မာပြတ်သားစွာ ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းအတည်ပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သဘောတူညီချက် ၅ ရပ်အတိုင်း လျင်မြန်တိကျစွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်မှုကို အလေးပေးတင်ပြပါသည်။ EU သည် ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Erywan Yusof ကို အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏ အထူးသံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်သည့်အပေါ် လှိုက်လှဲစွာ လက်ခံကြိုဆိုခဲ့ပြီး အထူးသံတမန်၏ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းဒေသအသီးသီးရှိ အဓိကပတ်သက်ဆက်နွှယ်သူအားလုံးနှင့်သာမက ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးသံတမန်နှင့်ပါမိတ်ဖက်ပြုလျက် အပြုသဘောဆောင်ပြီး အားလုံးပါဝင်သော ဆွေးနွေးပွဲအား ဦးဆောင်ကျင်းပမှုကို အပြည့်အဝပံ့ပိုးကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံသဘောတူညီချက် ၅ ရပ်ကို ပြည့်စုံစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အာဆီယံအထူးသံတမန်နှင့်အတူ အပြုသဘောဆောင်စွာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် ဥရောပသမဂ္ဂက တောင်းဆိုပါသည်။ အာဆီယံအထူးသံတမန်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပုံမှန်လာရောက်ကြည့်ရှုရာ၌ အဆင်ပြေအောင် စစ်တပ်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတွေ့ဆုံလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနှင့်လွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးတင်ပြပါသည်။
အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဟုဆိုရာတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH)၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)၊ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လက်ရှိအကျပ်အတည်းကာလအတွက် အကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနည်းကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ဒီမိုကရေစီလိုလားသော အခြားအင်အားစုများစသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာပတ်သက်ဆက်နွှယ်သူအားလုံး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့် အထူးပြောကြားလိုသည်။ ကနဦးကတည်းက အားလုံးပါဝင်ထားသော ဆွေးနွေးပွဲအစစ်အမှန်ကသာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ငြိမ်းချမ်းပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် အများပြည်သူသေကျေပျက်စီးမှုများနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာမှုများကိုပေါ်ပေါက်စေသည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာမှု၊ ကျေးလက်ဒေသများတွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ သိသိသာသာ တပ်ဖြန့်ထားမှုနှင့် တိုက်ပွဲများတိုးပွားလာမှုတို့အပေါ် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီး အကြမ်းဖက်မှုများကို ချက်ချင်းအဆုံးသတ်ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝလေးစားမှုရှိရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၏ဘက်မှ အခိုင်အမာရပ်တည်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ အာဏာသိမ်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုရန်၊ စစ်မှန်သော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နိုင်ငံအား ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအပေါ် ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန်တို့ကို ထပ်လောင်းတောင်းဆိုပါသည်။ ပြည်သူအများစု၏ သဘောထားကို အလေးထားမှသာလျှင် ထိုသို့ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် နိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါပျံ့နှံ့မှုထိန်းချုပ်ရေး အရေးပေါ်အကူအညီများအပါအဝင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု၊ ဘက်မလိုက်မှု၊ သမာသမတ်ကျမှုနှင့် အမှီအခိုကင်းမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများနှင့်အညီ ဆက်လက်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လုပ်သားများနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်အပြင် နေရပ်စွန့်ခွာသူများနှင့် လိုအပ်ချက်ရှိသူများအားလုံးထံ အကူအညီများ ဘေးကင်းမြန်ဆန်၍ အဆီးအတားမဲ့စွာ လက်လှမ်းမီရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် စစ်တပ်အာဏာပိုင်များကို တိုက်တွန်းပါသည်။ EU သည် အဆိုပါအကူအညီများကိုပေးအပ်ရာ၌ လူသားချင်းစာနာကူညီမှုဆိုင်ရာ အာဆီယံညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံးအပါအဝင် နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။
Myanmar/Burma: declaration by the High Representative on behalf of the European Union to support the work of the ASEAN Special EnvoyAhead of the ASEAN Summit on 26 October, the European Union reiterates its strong support for ASEAN’s efforts in findingapeaceful solution to the current crisis and stresses the need for Myanmar to implement swiftly and faithfully the five-point consensus, in order to beginaprocess of de-escalation and return to democracy.
The EU has welcomed the appointment of the ASEAN Chair’s Special Envoy, Brunei Darussalam’s Minister of Foreign Affairs II, Erywan Yusof, and stands ready fully to support the Special Envoy in facilitatingaconstructive and inclusive dialogue with all key stakeholders, in all regions of the country, and in partnership with the Special Envoy of the Secretary-General of the United Nations. The European Union calls on Myanmar to engage constructively with the ASEAN Special Envoy to implement fully and completely the ASEAN Five Point Consensus.
It stresses the need for the military to facilitate regular visits to Myanmar by the ASEAN Special Envoy, and for him to be able to engage freely with all he wishes to meet.The European Union underlines thatameaningful political dialogue must include all relevant stakeholders, including the Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), the National Unity Government (NUG), ethnic groups, political parties and other pro-democracy forces committed to working towardsapeaceful resolution of the current crisis. Onlyatruly inclusive dialogue from the outset can ensureapeaceful and sustainable future for Myanmar.The European Union is deeply concerned about the escalation of armed conflict, significant deployment of the armed forces in rural areas, and an increase in clashes, causing civilian casualties and displacement, and calls for an immediate end to the violence and the full respect of human rights.
The European Union firmly stands with the people of Myanmar/Burma and reiterates its call for the immediate and unconditional release of President Win Myint, State Counsellor Aung San Suu Kyi, and all those detained in connection with the coup, the establishment ofagenuine political dialogue andapeaceful return to the country’s democratic path. This can only be achieved by respecting the will of the overwhelming majority of the people in the country. The European Union will continue to provide humanitarian assistance, in accordance with the principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, including urgent aid to contain the outbreak of COVID-19 in the country.
It urges the military authorities to ensure rapid, safe and unhindered access to all displaced persons and people in need, including by ensuring the safety of humanitarian and health workers. The EU stands ready to cooperate with international partners, including the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance, to provide such aid.
Tags: Breaking NewsCDMEUEuropean Union in MyanmarNUGPDFSpring Revolution